DXF: inona no tokony ho fantatrao momba io fisie io | Fitaovana maimaim-poana
Isaac | | General, Fanontana 3D
Mety tonga tamin'ity lahatsoratra ity ianao satria fantatrao ny fisie amin'ny endrika DXF ary mila mahafantatra zavatra bebe kokoa momba azy ireo ianao, na noho ny fahalianana fotsiny satria tsy fantatrao izy ireo. Amin'ny tranga iray toy ny amin'ny tranga hafa, hiezaka ny hampiseho aminao ireo zavatra tena ilaina rehetra tokony ho fantatrao momba ity endrika rakitra manan-danja ity eo amin'ny sehatry ny endrika.
Ho fanampin'izay, tokony ho fantatrao fa misy maro rindrambaiko mifanaraka miaraka amin'ity endrika ity, ary tsy ny AutoCAD ihany no afaka mitahiry endrika na manokatra azy ireo ao amin'ny DXF. Raha ny tena izy, betsaka ny azo atao ...
1 Inona ny DXF?
2 Rindrambaiko mifanentana
3 Fanontana 3D sy DXF
4 DXF ho an'ny fanontana 3D sy CNC
Inona ny DXF?
DXF no fanafohezana amin'ny teny anglisy ho an'ny Darwing Exchange Format. Endrika fisie miaraka amin'ny extension .dxf ampiasaina amin'ny sary na volavolan-tsain'ireo solosaina, izany hoe ho an'ny CAD.
Autodesk, tompona sy mpamorona ny lozisialy AutoCAD malaza, no namorona an'ity endrika ity, indrindra mba ahafahana mifampitantana eo amin'ny fisie DWG ampiasain'ny rindrambaiko sy programa hafa mitovy aminy eny an-tsena.
Mitsangàna voalohany ao amin'ny 1982, miaraka amin'ny kinova AutoCAD voalohany. Ary io dia rehefa nandeha ny fotoana dia nanjary sarotra ny DWG, ary sarotra ny nampiditra azy tamin'ny alàlan'ny DXF. Tsy ny asa rehetra mifanaraka amin'ny DWG dia nafindra tao amin'ny DXF ary izany dia miteraka olana mifanentana sy tsy fitoviana.
Ambonin'izany, DXF dia noforonina ho toy ny karazana rakitra fifanakalozana sary ho a endrika manerantany. Amin'izany fomba izany, ny maodelin'ny CAD (na maodely 3D) dia azo tehirizina sy ampiasain'ny rindrambaiko hafa na ny mifamadika amin'izany. Izany hoe, ny tsirairay dia afaka manafatra na manondrana amin'ny endrika mora ity.
DXF dia manana maritrano mitovy amin'ny tahiry fanaovana sary, mitahiry fampahalalana ao lahatsoratra tsotra na mimari-droa hamaritana ny fisehona ary izay rehetra ilaina hanarenana ity iray ity.
Tsy misy farany rindrambaiko fampiharana izay mahazaka an'ireto rakitra ireto amin'ny endrika DXF, ny sasany dia afaka manokatra sy mampiseho ireo endrika fotsiny, ny hafa koa afaka manafatra / manondrana ary koa manova ny endrika.
Entre ny lisitry ny lozisialy fantatra fa afaka mifanaraka amin'ny DXF dia manasongadina:
Blender (mampiasa script import)
Araka ny ny lampihazo hiara-miasa aminao dia azonao atao ny mampiasa fampiharana iray na hafa. Ohatra:
Android- Azonao atao ny mampiasa AutoCAD izay misy ihany koa ho an'ny fitaovana finday ary manaiky DXF.
Windows- Azonao atao koa ny mampiasa AutoCAD sy Design Review ankoatry ny hafa, toy ny TurboCAD, CorelCAD, CorelDraw, ABViewer, Canvas X, Adobe Illustrator, sns.
macOS: Misy programa famolavolana fanta-daza maromaro, ny iray amin'izy ireo dia AutoCAD, fa manana SolidWORKS, DraftSight, sns ianao.
Linux: iray amin'ireo malaza indrindra sy be mpampiasa indrindra dia ny LibreCAD, fa azonao atao koa ny mampiasa DraftSight, Inkscape, Blender, FreeCAD, sns.
mpitety: mba hanokafana DXF an-tserasera, tsy mila programa, azonao atao ihany koa ny manao izany avy amin'ny tranokalanao tianao ShareCAD na koa ProfiCAD.
Ary mazava ho azy, misy fitaovana an-tserasera sy eo an-toerana niova fo eo anelanelan'ny endrika fisie samihafa, ao anatin'izany ny DXF. Noho izany, azonao atao ny manova na amin'ny endrika hafa tsy misy olana. Na dia tsy manome toky aho fa hitovy ny endrika na zavatra tsy mifanaraka ...
Fanontana 3D sy DXF
Raha mampiasa a 3D mpanonta tokony ho fantatrao fa misy koa rindrambaiko ho an'ny miovaova eo amin'ny endrika samihafa tena mahaliana. Ireto misy safidy roa hafa:
mesh laboratoara: Loharano misokatra, rindrambaiko azo entina izay be mpampiasa hanodinana sy hanovana ny meshes 3D. Afaka mamokatra zavatra amin'ny endrika samihafa ianao, toa ny OBJ, OFF, STL, PLY, 3DS, COLLADA, VRML, GTS, X3D, IDTF, U3D ary, mazava ho azy, DXF. Azo alaina ho an'ny Linux (na amin'ny fonosana Snap universal na amin'ny AppImage ho an'ny distro rehetra), macOS, ary Windows.
MeshMixer: dia mitovy amin'ny teo aloha ihany, izay solony. Amin'ity tranga ity dia maimaim-poana koa izy io ary misy ho an'ny macOS sy Windows.
DXF ho an'ny fanontana 3D sy CNC
Miaraka amin'ny fielezan'ny Fanontana 3D sy milina CNC Ao amin'ny indostria, ny rakitra DXF dia nanjary manan-danja tokoa. Tokony ho fantatrao fa misy tranokala sasantsasany mamela anao hisintona rakitra DXF miaraka amina endrika efa vonona hanamorana ny fananganana zavatra. Amin'izay dia tsy mila mamorona azy ireo ianao, izay tena manampy, indrindra raha tsy hainao ny mitantana rindrambaiko CAD.
Misy tranokala sasany aloa, izany hoe tsy maintsy mandoa famandrihana ianao mba hahafahanao miditra amin'ireo endrika ary misintona azy ireo malalaka. Ny hafa dia maimaim-poana, ary afaka mahita kely amin'ny zava-drehetra ianao. Avy amin'ny logo tsotra hahafahanao mamorona azy ireo avy amin'ny DXF alaina miaraka amin'ny masininao, amin'ny zavatra, firavaka, fanaka, takelaka, sns.
Ohatra, raha te hanomboka hanandrana ny DXF amin'ireo programa rindrambaiko voatanisa etsy ambony ianao dia mamporisika anao hampiasa ny iray amin'ireto tranonkala maimaim-poana:
DXF Ho an'ny CNC
Rakitra CNC DXF
Sahala amin'izany ho lasa hainao tsara ilay endrika ary miaraka amin'ireto volavola ireto, na andramo ny masinina novidinao raha hahomby ny asany ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitaovana maimaim-poana » Fanontana 3D » DXF: inona no tokony ho fantatrao momba ity endrika fisie ity
Connecting Harting: inona no tokony ho fantatrao